Qubanaha » Guddi Saraakiil ah oo tababari doono ciidan boolis oo uu yeesho Maamulka Hirshabeelle.
Guddi Saraakiil ah oo tababari doono ciidan boolis oo uu yeesho Maamulka Hirshabeelle.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka Dowladd goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa tababar magaalada Muqdisho ugu soo xiray saraakiil sar sare oo booliis ah oo ka shaqeyn doonaa dhisidda iyo tababarida Ciidan Boliis ah oo ay yeelato Hirshabeelle.
Saraakiishani iyo qubaro dhinaca booliska ah ayaa ka faa’ideystay tababarkasi oo soconayay seddexdii cisho ee la soo dhaafay, waxaana ka qey qaatay tababarkaasi oo hirgelintiisa lahaa Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya iyo AMISOM.
Dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa qorsheyneya dhisida ciidan boolis oo u gaar ah oo awood u yeesha hanashada amniga deegaanada Hirshabeelle, waxaana la diyaarinayaa qorista iyo tababarida ciidamadaasi oo ka shaqeyn doona u qidmeynta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Hirshabeelle.
Wasiirka Arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo tababarkaasi soo xiray ayaa u mahadceliyay AMISOM iyo Xafiiska Qarmada Midoobay ee Soomaaliyay sida ay u fuliyeen tababarkani oo ah mid dhaxal gal ah oo ay ka faa’ideysteen guddigan ka shaqeyn doona hirgelinta iyo dhisida Ciidan Boolis ah oo ay yeelato Hirshabeelle.
Dhowaan ayaa la filayaa in Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble uu tababbar u furo Dufcadii ugu horeysay oo Ciidamo boolis ah oo uu yeesho maamulka.